RASMI: Berlusconi oo heshiis la galay maalqabeennada doonaya AC Milan (Warbixin) – Gool FM
(Milano) 10 Maajo 2016 – Wixii la sugaba iminka ayay rasmiyoowdey oo milkiilaha AC Milan ee Silvio Berlusconi wuxuu ogolaaday inuu si gaar ah ula xaajoodo ganacsatada Chinese-ka ah ee doonaya inay iibsadaan kooxda Milan, waxaana lacagta ay diyaarka la yihiin lagu sheegay €740m oo euro.
Sharikadda uu leeyahay Silvio Berlusconi ee Fininvest ayaa maanta soo saartay war rasmi ah oo ay ku xaqiijisay inay heshiis dhigaya wada xaajood dhowran la gelayaan bilyineerro Chinese ah.
Waxaa la sheegayaa in heshiiskan lagusoo afmeero doono muddo 45 maalmood ah taasoo ku eg 15-ka Juun, balse madaxwayne Berlusconi ayaa heshiiska ku darsaday shuruudo uu heshiiska uga bixi karo isagoon wax cuquubo ah wajihin.
Warsidaha Corriere dello Sport cayaa qoraya in berriba ay bilaabmi doonaan hoowlaha muhimka ah ee ay ku eegayaan koontooyinka kooxda oo ay marka hore 70% ka iibsan rabaan iyagoo 30% kula wareegaya muddo sanad ah, iyadoo uu qiimaha guud yahay €740m.
Berlusconi ayaa waloow uu heshiiska ku darsaday shuruudo siinaya awoodda guud, misna sida uu qorayo MilanNews.it ma jirto ‘xannibaad’ toos ah ku aaddan suuqa kala iibsiga inta lagu jiro xilliga uu soconayo heshiiskan gaarnimad ah.
“Fininvest waxay heshiis ay muddo si gaar ah ula xaajoonayso la gashay guruub maalgashadayaal ah oo Chinese ah oo qayb ka iibsanaya AC Milan. ” ayaa lagu yiri warka kasoo baxay sharikadda gacanta ku haysa kooxda.
Taa bedelkeeda, wixii tillaabo ah oo wayn waa la isla eego doonaa iyadoo lala tashanayo ganacsatadan Chinese-ka ah kahor inta aan la socodsiinnin, taasoo lkn aysan ku jirin laacibiinta qandaraaskooda la dheerayn rabo.
Dhanka kale, war ka imanaya dhanka maalgashadayaashan Chinese-ka ah ayay ku sheegeen inay ku ”rajo wayn yihiin” inay si dhaqse ah ula wareegaan AC Milan, sida uu sheegayo la taliyohooda Talyaani-Maraykanka ah ee Sal Galatioto.
“Maalgashadayaasheennu waxay heshiis gaar ah la galeen Fininvest ay toos ugu bilowdaan wada xaajoodyada AC Milan,” ayuu yiri Galatioto oo la hadlayey La Stampa.
“Tani waa tillaabo ku aaddan soo gebagebaynta heshiiska. Rajo wayn baannan inaan dhaqse heshiis ula gaarno Fininvest.” ayuu raacshey.
GOOGOOSKA: West Ham United vs Manchester United 3-2 (Man Utd oo la maray)
EPL: WHM VS MAN U 3-2...Man Utd oo badis oo baskoodii oo la jejebiyey la iskugu daray! (Daawo)